ngu admin ku 20-01-16
ubuchwepheshe obuqandayo bephrofayili yokuqanjwa kwephrofayili ye-aluminium. Ukucutshungulwa kwamaphrofayili we-aluminium afakiwe. Amaphrofayili we-Aluminium ancibilikisiwe futhi anwetshiwe ukuthola izingxenye ezihlukile ze-aluminium.Inqubo yokukhiqiza yamaphrofayili we-aluminium ikakhulukazi aqukethe izinqubo ezi-3. yilezi: Ukujikijeleka ...
I-Aluminium ibe yinto enhle kakhulu kwabanye abenzi bezimoto. Izimoto ezinemizimba ye-aluminium zinamandla amakhulu okuthuthukisa umnotho wamafutha, ukumelana nomthelela nokusingathwa. Ama-automaker amaningi emhlabeni jikelele abona ikusasa lemizimba ye-aluminium futhi bakholelwa ukuthi lokhu okusetshenziswayo kuzothuthukisa ukuthuthukiswa ...
Ulwazi oluncane mayelana ne-aluminium
ama-luminum amaqiniso akunika imininingwane ephathelene nezinto zemvelo ezisetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zezimboni. I-Aluminium ibhekwa njengezinto ezipholile. Kuyinto yesimanje, emincane, eqinile futhi emile. Ungathola i-aluminium esetshenziselwa ukudala i-can, ibhodlela neminye imikhiqizo eminingi. Nawa amaqiniso athakazelisayo nge-aluminium ...